Maxaa kala socotaa xiliga la dhisaayo golaha Adeega Garsoorka dalka (Akhriso) - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kala socotaa xiliga la dhisaayo golaha Adeega Garsoorka dalka (Akhriso)
Maxaa kala socotaa xiliga la dhisaayo golaha Adeega Garsoorka dalka (Akhriso)
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Cadaaladda Xukuumada Federaalka ah ee Somalia Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaaca ka qaaday xiliga uu soo dhisaayo Golaha Adeega Garsoorka dalka.
Wasiirka ayaa sheegay inay soo dadajinayaan dhismaha Golaha Adeega waxa uuna cadeeyay in muhiimada ugu weyn ay siin doonaan sida Shacabka ay ku heli lahaayen Garsoor Cadaalad ah.
Wasiirka Cadaalada oo ka hor hadlaayay baarlamanaka Somalia ayaa sheegay in Guddiga Adeegga garsoorka uu ku soo dhisayo muddo 2 bilood ah, isaga oo kala tashanaaya maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka.
Waxa uu sheegay in tani sahli karto in lahelo Garsoor loo dhan yahay kaas oo lag dhisi doono dalka oo dhan si ay u yaraato Cabasahda Shacabka ee dhanka Garsoorka dalka Soomaaliya.
Waxa uu sidoo kale, sheegay in Golaha Adeega Garsoorka dalka ay noqon doonaan kuwo ku dhisan Cadaalad isla markaana maamul weliba ay heli doonaan qoondada ay xaqa u leeyihiin.
Geesta kale, Wasiirka ayaa ku baaqay inaanu ka dib dhici doonin mudada labada bil ee uu qabsaday waxa uuna ku baaqay in lala shaqeeyo.